I-Nasa ibhaso lokuthengisa imithwalo yemoto yendlela yokungena kweSango ukuya kwi-SpaceX - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-Nasa ibhaso lokuthengisa imithwalo yemoto yendlela yokungena kweSango ukuya kwi-SpaceX
Imigaqo yesivumelwano seenkonzo zeSango eliPhezulu liya kufuna ukuba i-SpaceX ihambise imithwalo enzima yoxinzelelo kunye noxinzelelo, izinto zokuqokelela isampulu kunye nezinye izinto ezinokufunwa ngabasebenzi kwi-Gateway craf kunye nangohambo lwabo kumphezulu wenyanga.
U-Nasa uchaza ibhaso njengenyathelo elibalulekileyo eliya phambili kwinkqubo yalo yeArtemis, ejolise ekufezekiseni umhlaba wabantu kwiNyanga kwakhona ngo-2024 kunye nokwakha ubukho bokuzinza kwabantu ngokuzinzileyo.
“Eli bhaso lesivumelwano lelinye icandelo lesicwangciso sokubuyela eNyangeni ngokuzinzileyo,” utshilo uMlawuli we-NASA uJim Bridenstine.
"Isango lilitye lembombo loyilo lweArtemis lwexesha elide kwaye lo msebenzi unzulu wezentengiselwano uhlanganisa elinye iqabane lomzi mveliso kwizicwangciso zethu zokukhangelwa kwabantu kwiNyanga ukulungiselela inkonzo ezayo kwi-Mars."
I-NASA ithi icwangcisa iindawo ezininzi zokuhambisa apho ispacecraft semithwalo siza kuhlala kwisikhululo sokujikeleza iinyanga ezintandathu ukuya kwezili-12 ngexesha.
"Ukubuyela eNyangeni kunye nokuxhasa ukukhangelwa indawo kwixesha elizayo kufuna ukuhanjiswa kwexabiso lemithwalo," utshilo uMongameli we-SpaceX kunye neGosa eliyiNtloko eliSebenzayo uGwynne Shotwell. "Ngobambiswano lwethu ne-NASA, i-SpaceX besizisa uphando lwezesayensi kunye nezixhobo ezibalulekileyo kwiSikhululo samaNtla seHlabathi ukusukela ngonyaka ka-2012, kwaye ke sinelungelo lokuqhubeka nomsebenzi ngaphaya kwendlela yomhlaba kwaye sithwale imithwalo yeArtemis siye eGateway."
Iikhontrakthi zeenkonzo zokunikwa kwemisebenzi ziqinisekisa imisebenzi emibini yokuthumela kumnikezeli weenkonzo zeenkonzo ezinenani elipheleleyo lamaxabiso ezigidi zeedola ezisi-7 kuzo zonke izivumelwano njengoko kufuneka imisebenzi eyongezelelweyo.
Iflethi ye studio
KwiSango ngokwalo, i-NASA yatsho ngaphambili:
Ii-Astronauts zizakundwendwela iSango okungenani kube kanye ngonyaka, kodwa azizukuhlala unyaka wonke njengabasebenzi abakwiSikhululo seNdawo seHlabathi. Isango lincinci kakhulu. Ingaphakathi layo limalunga nobukhulu begaraji ye studio (ngelixa isitishi sesithuba sikhulu kunendlu enamagumbi amathandathu). Xa sele ikhutshiwe, oosomajukujuku banokuhlala kwaye basebenze ngaphakathi kwisithuba esimalunga neenyanga ezintathu ngexesha, benze uvavanyo lwesayensi, kwaye bathathe uhambo oluya kumphezulu weNyanga.
Nokuba ngaphandle kwabasebenzi abakhoyo, iirobhothi ezisika umda kunye neekhompyuter ziya kusebenza kwiimvavanyo ngaphakathi nangaphandle kwesikhala, ngokuzenzekelayo zibuyisele idatha eMhlabeni.
Unokufunda ngakumbi ngeprojekthi yenyanga kwiwebhusayithi yeNasa.
Ikhredithi yemifanekiso: SpaceX-Umzekeliso we-SpaceX Dragon XL njengoko usasazwa kwinqanaba lesibini leFalcon Hard kwiParadise yoMhlaba kwindlela yayo eya kwiSango kwi-orbit yenyanga.
Bona kwakhoI-NASA inyula kuqala iifayile zenzululwazi ezimbini zokuqala kwiLunar Gateway